Madaxweyneyaasha maamul Goboleedyada oo kulan gaar u socda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyneyaasha maamul Goboleedyada oo kulan gaar u socda
Ardaan Yare 6 February 2021
Madaxweyneyaasha dowlad Goboleedyada dalka ayaa xiligaan waxaa uu kulan uga socdaa Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda maamulka Galmudug, kadib markii uu natiijo la’aan kusoo dhammaaday Shirkii Madaxda ee halkaas ka dhacay.
Warar la helayo ayaa sheegaya in shirka u socda Madaxweyneyaasha sida Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Puntland iyo Galmudug looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashada dhaceysa.
Shirkii Madaxda dowladda, kuwa maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ee looga hadlaayay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka ee maalmihii lasoo dhaafay ka socday Dhuusamareeb ayaa kusoo dhammaaday natiijo la’aan.
Inta uu socday Shirka ayaa waxaa aad looga dooday saddex qodob oo la isku haayay, kuwaasi oo kala ah arrinta Gobolka Gedo ee Maamulka Jubbaland, Guddiyada la magacaabay iyo Arrinta Xildhibaanada Gobolada Waqooyi.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Jubbaland ku eedeeysay in heshiis looga gaari gaarayay Shirkii Madaxda, isla markaana lagu kala tegay Shirkii u socday Madaxda ee uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo.
Dhinaca kale Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa Madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay in uusan diyaar u aheyd in xal laga gaaro arrinta Gobolka Gedo, isagoona sheegay, isagoo sheegay in Farmaajo diiday in Jubbaland lagu wareejiyo Maamulka Gobolka Gedo.
Al-shabaab oo weerar Jid-gal ah ku qaaday Guddoomiye iyo dagaal ka socda…
Madaxweyne Farmaajo oo Arrin culus ku Eedeyay Puntland iyo Jubbaland